Yintoni isilwanyana esingumncedi? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Yintoni isilwanyana esingumncedi?
E-Airbnb, izilwanyana ezingabancedi zibandakanya zonke ezi zinto zilandelayo:
Izilwanyana ezincedayo: Inja eqeqeshwe ngokukhethekileyo ukuze incede umntu onesiphene, enoba sisemzimbeni, kukho ilungu elingasebenziyo okanye unesiphene esisengqondweni. Ngamanye amaxesha, ezi zilwanyana kuthiwa zizinja "ezinamehlo abonayo", izilwanyana ezincedayo, inkonzo yezilwanyana okanye izilwanyana zenkxaso. Imizekelo yemisebenzi izilwanyana ezingayenza iquka, kodwa ingekokuphela kwayo:
Ukunceda abantu abangaboniyo okanye ababona kancinci ekuhambahambeni nakweminye imisebenzi
Ukulumkisa abantu abazizithulu okanye abeva kancinci ngobukho babantu okanye ngezandi
Ukubonelela ngokhuseleko olungenabungozi okanye umsebenzi wokuhlangula
Ukutyhala isitulo samavili
Ukunceda umntu xa exhuzula
Ukwazisa abantu ngezinto ezinokuvusa ii-alleji zabo
Ukufumana izinto ezifana namayeza okanye ifowuni
Ukubonelela ngenkxaso yangokwenyama nokuncedisa abangakwaziyo ukuzihambela
Ukunceda abantu abaphazamiseke engqondweni ukuba bangabandakanyeki kwimikhwa eyonzakalisayo
Inkxaso engokweemvakalelo kwizilwanyana: I-Airbnb ithi izilwanyana ezingabancedi ziquka nezilwanyana ezinikela inkxaso engokweemvakalelo. Ezi zizilwanyana ezisetyenziselwa uncedo lwempilo okanye zincedise umntu ekwenzeni imisebenzi yakhe yemihla ngemihla, kodwa aziphelelanga kuhlobo oluthile lwesilwanyana kwaye akuyomfuneko ukuba ziqeqeshelwe ukunceda umntu kumsebenzi othile. Ngamanye amaxesha ezi zilwanyana kuthiwa zizilwanyana zentuthuzelo.
Ngaba kulindeleke ukuba ababuki zindwendwe bazamkele izilwanyana ezingabancedi?
Ewe, ngaphandle kokuba kukho ingozi kwimpilo okanye ukhuseleko (jonga ngezantsi). E-Airbnb, siyaqonda ukuba ukuncedwa zizilwanyana akufani nokuba nezilwanyana nje zasekhaya ibe kona kudlala indima enkulu kubanini bazo. Njengokuba kuboniswe kwiPolisi yethu yokungacaluli, kulindeleke ukuba ababuki zindwendwe balwamkele ubhukisho ekukho isilwanyana esincedayo kulo, enoba kwimithetho yendlu kuthiwe izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
Kunini apho umbuki zindwendwe anokucela undwendwe ukuba lususe isilwanyana esincedayo?
Umbuki zindwendwe unokucela undwendwe ukuba lususe isilwanyana esincedayo ukuba:
Isilwanyana asilawuleki nabanikazi baso abenzi mgudu waneleyo wokusinqanda.
Isilwanyana asiqeqeshelwanga ukuhlala endlini nabantu
Enoba kukweyiphi imeko, umbuki zindwendwe kusafuneka enike undwendwe ithuba lokuhlala endlini ngaphandle kwesilwanyana ukuba undwendwe lukhetha ukwenjenjalo. Qaphela ukuba ekubeni umsebenzi wezi zilwanyana ikukunikela inkxaso ngokweemvakalelo, akumele zishiywe zodwa endlini.
Ngaba iindwendwe kufuneka ziqale zichaze ukuba zinezilwanyana ezizincedayo aziza nazo ngaphambi kokubhukisha?
Hayi. Nangona iindwendwe zinganyanzelekanga ukuba zichaze ngobukho bezi zilwanyana ngaphambi kokubhukisha, sisoloko sikhuthaza ukuba kungafihlwa nkcazelo ukuze kuqinisekwe ukuba wonke umntu uphatheka kakuhle.
Ngaba kulungile ukongeza imali emele ibhatalwe, okanye kunyuswe ixabiso lokucoca kuba kukho isilwanyana esincedayo?
Hayi, phantsi kwePolisi yokungacaluli ye-Airbnb, ababuki zindwendwe abanokukwazi ukonyusa ixabiso kwiindwendwe ezinezilwanyana ezincedayo.
Ngaba kulungile ukucela amaxwebhu esilwanyana esincedayo?
I-Airbnb ayifuni maxwebhu xa uhamba nesilwanyana esincedayo. E-United States, akufunwa maxwebhu esilwanyana esincedayo kwiindwendwe ibe akukho nkqubo isemthethweni yokuqinisekisa izilwanyana ezincedayo. Xa undwendwe luchaza ukuba lona lunesilwanyana esincedayo, umbuki zindwendwe angabuza:
Enoba eso silwanyana sikho ngenxa yokukhubazeka
Nguwuphi umsebenzi isilwanyana esiqeqeshelwe ukuba siwenze
Ukuba uya kwindawo ezingaphandle kwe-United States, nceda uqaphele ukuba iimfuno zisenokohluka. I-Airbnb iyaqonda ukuba eminye imithetho ayizamkeli tu izilwanyana, kuquka nezo zincedayo, ibe asifuni ababuki zindwendwe bophule imithetho yasekuhlaleni okanye benze izinto ezibophulisa umthetho.
Ingaba umbuki zindwendwe angakwazi ukucela isibonelelo esongezelelekileyo ukuba isilwanyana senze umonakalo omkhulu endlwini?
Ewe, kanye njengokuba umbuki zindwendwe ekwazi ukuthatha inxalenye okanye yonke idiphozithi yondwendwe ukuze abhatalele umonakalo owenziwe lundwendwe. Nangona kusengqiqweni ngombuki zindwendwe ukulindela ukuba isilwanyana esincedayo siqeqeshekile yaye asizokwenza monakalo, Isiqinisekiso sokubuyiselwa okulahlekileyo kunye nediphozithi zihlala kumbuki zindwendwe ukwenzela xa kunokubakho ingozi, nangona loo nto inqabile.
Kuthekani ukuba ndinengxaki yempilo okanye ixhala lokukhuseleka ngenxa yezilwanyana ezincedayo?
Kubalulekile gqitha ukuqonda ukuba, isilwanyana esincedayo, nokuba sisilwanyana senkonzo okanye esinika inkxaso ngokweemvakalelo, sidlala indima enkulu ekuncedeni undwendwe lwakho lukwazi ukuhambahamba. Nangona kunjalo, ukuba indlu yakho iquka indawo esentyenziswa ngumntu wonke ibe isilwanyana esincedayo siza kubangela ingxaki yempilo kuwe okanye kwabanye, (ngokomzekelo ii-alleji nezilwanyana ezingakwaziyo ukuhlala nezinye izilwanyana kwindawo enye ngenxa yokhuseleko), asiyi kufuna wamkele iindwendwe ezinezilwanyana ezincedayo. Nceda uyenze icace le nto uze ube nembeko xa uthetha ngale nto kwiindwendwe zakho. Sikwakucebisa ukuba uyiquke le nkcazelo ephathelele nayiphi i-alleji okanye inkxalabo yokhuseleko engezilwanyana zasekhaya kwindawo yakho esentyenziswa ngumntu wonke ukuze incede iindwendwe zakho zangomso.
Ubhukisho lwam lwakhatywa kuba ndinesilwanyana esincedayo. Ndenza ntoni ngaloo nto?
I-Airbnb ayizithathi lula tu iingxelo zokucalula kubahlali bethu.
Ukuba ukholelwa ekubeni uye wacalulwa kwindawo yethu, nceda uthumele ingxelo ngale fomu. Nceda unikeze iinkcukacha ezithile uze umchaze umntu okholelwa ukuba wophule iPolisi yethu yokungacaluli. Unokuphawula imilayezo okanye omnye umxholo okholelwa ukuba wophula ipolisi yethu. Inkcazelo engakumbi ngenkqubo yokuphawula ifumaneka apha.
Siza kuyiphanda le meko ibe sisenokulandelisa ngokufuna ngamaxwebhu ongeziweyo. Siza kukunceda ngokobuqu, sikuncede ubhukishe ukuze siqiniseke ukuba uyayifumana indawo yokuhlala.